Allgedo.com » Talo ku socota Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’ iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid
Talo ku socota Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’ iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid
Markii aan dhageeystey Cabashada ka imaaneysa Shacbiga Soomaaliyeed oo ku saabsan 4 sano ee la soo dhaafey ee Xukuumadda Madaxwene Xasan Sheekh maxamuud, Markii aan arkey musuq masuqa Maanta Dalka ka jira.
Waxaan go, aan sadey in aan Talo wanaagsan aan u soo bandhigo labada Odey ee Sharafta leh ee kala ah: Madaxwene Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’ iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaaarke, Taladaas oo ah in ay iska Dayaan ama ay ka haraan labadooda Tartanka Doorashada Madaxweyne nimda Soomaaliya maxaa yeeley Soomaalidu waxay Tirahda: QOF AAD TAQAANO YAAD TAHAY LAMA YIRAAHDO. Su, aashu waxay tahay: 4 sano ee la soo dhaafey maxaay qabtey Dowladda oo muuqda oo ku saabsan Dalka iyo Dadka ?.
Maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay Hoggaan Wanaagsan oo Daacad u ah Dalka iyo Dadka, kana hortaga Cadaalad Darida, Eexda, Laaluush Qaadashda iyo Wixii la mid ah.
Waxaan rajeeynaya in Madaxwene Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’ iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay qaadan doonaan Taladeyda Wanaagsan, Hadal keygana si xun ha u fahmina ee waa talo meesha ku jirta in wax lo sheego labadiina Odey ee Sharafta leh: Madaxwene Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’ iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke.
Shacbiga Soomaaliyeed wuxuu Doonaya Hoggaan aad iyo aad u Wanaagsan in ay helaan, Insha Allah Hoggaan wanaagsan wuu imaan doona.